ekhaya / Ingcaciso yomsebenzi / Bioinformatics Professionals Job Duty Template
superadmin Isilimela 18, 2016 Ingcaciso yomsebenzi Shiya amazwana 260 Views
Iinkcukacha Agriculture Professionals Work Inkcazelo Template
Yabahloli Job Sample
Community Abasebenzi Work Health Inkcazelo Template
Qhuba uphando usebenzisa iindlela Bioinformatics kunye hypothesis kwiindawo umzekelo iziyobisi, ubugcisa medical eziphilayo azo, Proteomics biology . Ngaba kubeko ifomula bafumane lokujongisisa nokuhoywa ulwazi lofuzo, okanye ulwazi olongezelelweyo organic zikuluhlu.
Semgangathweni wokuziqonda zonke iintlobo lezixhobo, biochemistries fresh, okanye isoftware ngokuya nemikhulu ngobuchule phenya izinto zonyango.
Nikela irekhodi kunye nezixhobo azo ukuba izinto eziphilayo-based ezifana umzekelo uhlalutyo amafa, zokukala sofuzo ukuzichaza, kunye zofuzo sizimisele.
Uyawalathisa lo msebenzi abasebenzi bolwazi ekuphumezeni kunye neengcali Bioinformatics iinjongo okanye izixhobo kwiindawo ezifana Bioinformatics umzekelo leyo yezonyango, transcriptomics, metabolomics, kunye Proteomics.
Iiprogram zekhompyutha ezintsha okanye wenze isoftwe ekhoyo ukwanelisa iimfuno ezithile umsebenzi clinical.
Yenza uyilo data zikuluhlu.
Yenza okanye uguqule iindlela ezisekelwe web Bioinformatics.
Isimbo, basebenzise ubuchule Bioinformatics kuquka bengagadwanga kwaye esweni ukufunda machine, uphuhliso edlamkileyo, okanye ubuchule imifanekiso.
Velisa iindlela azo fresh kunye neendlela ngobuchule njengoko-ezifunwa yi ekujoliswe zophando.
Ukuqulunqa ulwazi oluza kusetyenziswa iintshukumo umzekelo Bioinformatics oko zokusebenza kunye gene ibinzana iiprofayili.
izibonelelo zophando ukuxoxa ngokusebenzisa iincwadi zonyango, imiboniso emhlanganweni, okanye iingxelo oyenzayo.
Umbala kufumaneka ngokubanzi, ishishini kuhlu proteomic -genomic.
Tshekisha abahlaziyi ukuba uphando imiba, ukundulula ubugcisa-igxile iimpendulo, okanye aseke iindlela ukuba azo.
Hlalutya iiseti ezinkulu ezifana umzekelo genomic lweengcombolo data yendalo, kunye idatha malunga imisebenzi yophando lwezonyango okanye esisiseko.
Cebisa imisebenzi sokuxhasa.
Cela amacebiso ezivela kumacandelo afana umzekelo ukukhuthaza, Uphuhliso lwamashishini, kunye nemisebenzi nokuvumelanisa uphuhliso lwemveliso okanye inkqubela.
Ukusebenzisana usebenzisa software badwelisi benkqubo kwiinguqu kunye nenkqubela-software Bioinformatics ukuba ishishini.
imithombo Bioinformatics Examination kunye nesicelo entsha.
Yenza ushwankathelo nemifanekiso izibakala malunga genomes abantu.
Xelela abanye ngaphakathi neentlobontlobo kwaye usebenzise lwezixhobo ukuba Bioinformatics.
Ukwandisa ujongano ngamnye zekhompyutha Bioinformatics zikuluhlu.
Ukufunda imigca Isicatshulwa-ekuqondeni kunye nemihlathi kuphekelwe amaxwebhu anxulumene nomsebenzi.
Active-Ukuphulaphula-Ukubonelela ulwazi lonke ngoko abanye ngoku bathi, ukuthatha ixesha ukuba uqonde ukuba wadala izinto, imibuzo imibuzo ngendlela efanelekileyo, kwaye bhe kwi Kwiimeko ukuba ezingafanelekanga.
Ukushicilela-Ukuthetha ngempumelelo ebhaliweyo njengoko ezingafanelekanga ukuba iimfuno yabaphulaphuli.
Ukuthetha-Ukuthetha abanye ukuba babelane ngolwazi kwamandla.
Mathematics-Ukusebenzisa izibalo ukulungisa iingxaki.
izisombululo Uphando-Ukusebenzisa kunye nemigaqo yenzululwazi ukulungisa imiba.
Critical-UkuCinga-Ukusebenzisa sizathu kunye nokucinga ukuba baqaphele amandla kunye nengeloncedo neendlela, izigqibo okanye izisombululo ezinye iingxaki.
Active-Learning-Ukwazi imiphumo inkcazelo entsha kuzo zombini izigqibo okhoyo elizayo zokusombulula iingxaki kwaye.
Ukufunda Iindlela-icholwa nokusebenzisa zokufundisa ngeendlela / zokufundisa kunye neendlela tye ukuba ingxaki xa befunda okanye izinto zokuqeqesha ezintsha.
Ukukhangela-TrackingPEREvaluating ukusebenza ngokwakho, abantu ahlukeneyo, okanye iinkampani zithathe amanyathelo olungiso okanye ukwenza uphuculo.
Social Perceptiveness-Ukwazi iimpendulo othersA kunye ukuqonda isizathu sokuba bona basabela ngoxa benza.
izenzo nolungelelaniso-buyatshintsha malunga nabanye’ amanyathelo.
Ukweyisela-Effective abanye ukuba atshintshe imikhwa okanye ubuchopho babo.
Uthetha-thethwano-Ukuzisa abanye ngokudibeneyo nokukhangela ukuba abuyisele mahluko.
Ukuncedisa-Ukufundisa abanye nje indlela bafudukele.
Orientation-Ukuthatha inkampani efuna iindlela ukunceda abantu.
Advanced ukusombulula iingxaki-umahluko iingxaki ezintsonkothileyo siphanda data ezalana ukuphumeza iinketho kunye nokuphuhlisa nokuvavanya ukhetho.
Amashishini Evaluation-Ukuhlolisisa kufuna nobolwananiso kufuneka ukwenza uyilo.
Engineering Design-Ukuziqhelanisa izixhobo okanye ukuvelisa neteknoloji ukuze isebenze umntu kufuna.
Gear Ukhetho-isigqibo uhlobo kwezixhobo kunye nezixhobo ezifunekayo ukuze benze umsebenzi.
iinkqubo Izavenge-Ukongeza, iimveliso, ezintambo, okanye izixhobo ukuze anelise iinkcukacha.
Coding-kokuqamba izicelo kwikhompyutha kwizicelo ezahlukeneyo.
Imisebenzi Monitoring-Ukuhlola Imiqondiso ezongezelelweyo, izibambo, okanye izikhombisi ukuqinisekisa kukho isixhobo ezisebenza ngokuchanekileyo.
Inkqubo kunye nemisebenzi kwezixhobo okanye iindlela Control-Ukuthintela.
Izixhobo Ulondolozo-Ukwenza nokuyicoca oko kuyinto eqhelekileyo kwizixhobo kunye yesigqibo xa.
Zokusombulula-Ukucacisa izinto ngasemva glitche ukuba ulawulo kwaye ukhethe ukuba uqhubeke njani ngalo.
Ukulungisa-Ukulungisa imifuziselo okanye nobuchule usebenzisa iindlela eziyimfuneko.
Quality-Control Uphando-Ukwenza uhlolo kunye nokuhlolwa kweempahla, iinkonzo, okanye iinkqubo kugweba insebenziswano umgangatho.
Ubulumko kwezigqibo-Thathela ingqalelo iindleko jikelele kunye neenzuzo lweentshukumo ezinokwenzeka ukufumana lowo esifanelekileyo.
Uhlalutyo-Icacisa kufuneka basebenze luni kwenkqubo kunye indlela uphuculo kwimeko-bume, imisebenzi, kwakunye iimeko nefuthe iinzuzo.
Methods Evaluation-Ukuchonga amanyathelo okanye nezalathisi zomsebenzi kwakunye izinyathelo imfuneko yokuphucula okanye ukusebenza oluchanekileyo, xa kuthelekiswa neenjongo device.
Ixesha-Management-Ukulawula mzuzu kwabanye kunye nexesha lomnye.
Kweliso Savings-Ukumisa ingeniso iza kungekudala isetyenziswe njani ukufumana umsebenzi kufezwa, sezimali ezi inkcitho.
Management of Material Imithombo-Abafumana nokufumana ukuba ukusetyenziswa efanelekileyo iimpawu, izixhobo, nezinto ezifunekayo ukuze wenze umsebenzi othile.
Supervision of Workers Resources-Building, ekhuthazayo, nokuqondisa abantu ngenxa yokuba ukusebenza, ukumisela abantu abangcono kakhulu ukuba umsebenzi wakho.
uqeqesho Izidingo Experience Izidingo
Ukuphikelela – 90.20%
Matter ngokuphathelene Abanye – 78.96%
Direction Social – 78.95%
Ukuzibamba – 85.71%
ithembeke – 92.37%
Qaphelani Iinkcukacha – 91.72%
amandla – 89.80%
Thinking kohlaziyo – 97.00%
Fischer Operation iiTechnician Inkcazelo Template
izixhobo Umsebenzi oqeshwe wokuqhuba, ukulawula, or using nuclear energy to aid scientists in …
© Copyright 2018, Onke Amalungelo Agciniwe